मृग शिकार गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार १७:१८
रतुवा मृग शिकार गरेको आरोपमा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका ८ सिउरेनीटारबाट सात जना पक्राउ परेका छन् । खुमबहादुर माझीलाई मृगको मासु काट्दै गर्दा प्रहरीले गत आईतवार पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानका क्रममा अन्य छ जना भने शनिवार पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा रोल्पा घर भई सिउरेनीटार बस्ने इन्द्रजित वली, शिव रेग्मी, डीवी सापकोटा, पूर्णबहादुर माझी, मधु भुजेल, दुर्गाबहादुर भुजेल रहेका छन् ।
माझी सहित छ जना मृग मार्नमा संलग्न रहेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ पौडेलले बताए । उनीहरुलाई बन ऐन अनुसार बन्यजन्तु शिकार गरेको अभियोगमा मुद्धा दर्ता गरि कारबाही गरिने उनले बताए ।